SomaliaReport: Dagaalka Muqdishu Kordhay Xalay Saqdii Dhexe
By MOHAMED BEERDHIGE 01/11/2012
Sida ay sheegeen dadka degaanka iyo saraakil, dagaal culus ayaa ku dhexmaray ciidamada Dawlada Ku Meel Gaarka Somaaliya (DKMG) iyo Midowga Afrika (AMISOM) iyo al-Shabaab xalay degmada Dayniile ee Muqdishu.
Tirada khasaaraha dagaalka ayaa lagu murmay, DKMG oo sheegtay inay al-Shabaab ka dileen labo dagaalyahan, iyo al-Shabaab oo sheegatay ina ay dagaalka ku dhinteen Ciidamada AMISOm iyo DKMG. Qof shicib ahna waa lagu dhigay dagaalka.
Saraakiisha DKMG xaqiijiyay dagaalka iyagoo sheegtay inay al-Shabaab dagaalka ku jabiyeen.
"Haa, sida caadada u ah, al-Shabaab ayaa soo qaaday dagaal fulayeed lakiinse waan ku jabinay waxaana kaga dilnay saddex fallaago ah" sida uu sheegay sarkaal DKMG oo aan ismagacaabin.
Sidoo kale, al-Shabaab ayaa sheegatay inay ku weerar gaadmo ah ku qaadeen guuto gawaarida Ciidamada Xooga Kenya (CXK) iyo DKMG meel u dhow Qooqaani ee Jubada Hoose, iyagoo burburiyey labo gawaarida daabuleeya ciidamada isla markaana dilay 30 ciidamada DKMG iyo CXK oo ku jiray sarkaal sare.
DKMG oo dafiray khasaaraha ah 30 balse sheegtay in midkaliya laga dilay saddexna laga dhaawacay dhankooda. Waxay kaloo sheegeen inaan gawaari laga burburin.
"Waxay rasaas ku fureen gaadiidkayaga jidka isku xira Qooqaani iyo Tabta ee Jubada Hoose, wayna carareen. Wax khasaaro ahna ma jiraan, labada baabuurna waa la banjariyey," Axmed Deeq oo ah sarkaal DKMG ayaa usheegay Somalia Report.
Ciidamada DKMG iyo nabad-sugayaasha AMISOM oo guulo weyn ka gaaray Dayniile bishii Ogosto, laakiinse fallaagada al-Shabaab oo dagaalo dagaallo dhabarjabis ah ku qaada gaadiidka Muqdisho iyo koonfurta wadanka.